စက် operated linear actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > စက် operated linear actuator
စက် operated linear actuator
AOX-L ကို ကို စီးရီး စက် operated lတွင်ear actuator ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ lတွင်ear လုပ်ငန်းလည်ပတ် အဆို့ရှင် ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင် နှင့် တူသော usages.AOX ရဲ့ AOX-L ကို ကို စီးရီး စက် operated lတွင်ear actuator အစေခံ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, အပါအဝင် ဥရောပ, အဆိုပါ Americအဖြစ်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အဆိုပါ အလယ်တန်း Eအဖြစ်t နှင့် Souအဆိုပါအဖြစ်t အာရှ နိုင်ငံပေါင်း။ ဒါဟာ ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, heatတွင်g, ရေနံ, ဓါတုဗေဒ တွင်dustry, အီလက်ထရွန်းနစ်, အလင်း တွင်dustry, အစားအစာ, medicတွင်e, အထည်အလိပ်, စက္ကူ makတွင်g, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, smeltတွင်g, အသစ်က အင်အား နှင့် oအဆိုပါr လယ်ကွင်း။ တွင် ထို့အပြင်, က hအဖြစ် establဖြစ်hed အလွန် ဖော်ရွေ ဆက်ဆံရေး wကh များသော ဉစ္စာဓန 500 ကုမ္ပဏီများသည်။
anti-တုန်ခါမှုအဆင့်ကို: JB / T က 8219
ဆူညံသံအဆင့်ကို: 1 မီတာအတွင်းတွင်ထက်နည်း 75 dB
အမျိုးအစား signal ကိုပြောင်းလဲပစ်:
input signal ကို:4- 20 MA;0င် - 10 V ကို;2- 10 V ကို
output signal ကို:4- 20 MA;0င် - 10 V ကို;2- 10 V ကို
အရှုံး Signal Mode ကိုပြင်ဆင်မှုအား N / A
ခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ, တိကျ positioning ကို, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို
လက် / အော်တို clutch switching
ဆက်သွယ်ရန် mode ကိုရွေးချယ်ရေး
AOX-L ကိုစီးရီးမော်တာများအတွက် 1. Terminal နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု linear actuator operated
2. Cam နှင့်ကန့်သတ် switch ကို
အထက်နှစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အခွံမာသီး, အ setup ကိုပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကတစ်ဦးချင်းစီ cam, သီးခြားစီသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်နှင့်အတူတင်းကျပ်စီ cam အမြဲဒီအနေအထားတွင်ရှိနေပါဦးမည်။
AOX-L ကိုစီးရီးမော်တာများအတွက် 3. လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး linear actuator operated
လက်နှင့်အတူအလိုအလျောက် clutch function ကို။ အဆိုပါအဆို့ရှင်ပါဝါပျက်ကွက်၏အမှု၌ကို manually operated နိုင်ပါသည်။ မော်တာနှုန်းယခုအချိန်တွင််ထမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစေရန်အလိုအလျောက်ဥတုလက်ဘီး mesh စွမ်းရည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံရန်အလို့ငှာ, အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်းဝယ်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-L ကိုစီးရီးမော်တာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်တည်ထောင်ရန်လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖွဲ့ linear actuator operated ။
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်အပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူစတာတွေက high-tech ခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်နှင့် AOX ၏မူပိုင် R & D ကိုအသင်းကိုလေးစားမှုလုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-L ကိုစီးရီးမော်တာ linear actuator operated ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဖြေကျနော်တို့ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအများစုကိုလက်ခံပေမယ့် maily T / T, L ကို A / C, Western Union လက်ခံပါ။
မေး: နိုင်ငံများတွင်သင့်ရဲ့ AOX-L ကိုစီးရီးမော်တာရောင်းချ linear actuator operated နေသော?
hot Tags:: စက် operated linear actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်